"Indawo efanelekileyo yokubhala iyintloko yakho"
UVirginia Woolf wagxininisa ukuba ukuze abhale ngokufanelekileyo umfazi kufuneka abe "negumbi lakhe." Nangona kunjalo umbhali waseFransi u-Nathalie Sarraute wakhetha ukubhala kwindawo yokutya yasekuhlaleni - ngexesha elifanayo, itafile efanayo rhoqo ekuseni. Wathi, "Akukho ndawo," kwaye akukho namnye ophazamisayo-akukho fowuni. " Umnumzana uMargaret Drabble ukhetha ukubhala ekamelweni lehotele, apho angaba yedwa kwaye angaphazamiseki iintsuku ngelo xesha.
Uphi indawo efanelekileyo yokubhala? Kanye kunye ne-cum of talent kunye nento yokuthetha, ukubhala kudinga ukuxininisa-kwaye ngokuqhelekileyo kufuneke ukuba kuhlulwe. Encwadini yakhe yokubhala , uStephen King unikeza iingcebiso ezifanelekileyo:
Ukuba kunokwenzeka, akufanele kube nefowuni kwigumbi lakho lokubhala, ngokuqinisekileyo akukho tshane okanye amavidiyo afuna ukukhohlisa. Ukuba kukho iwindow, gwala amakhethini okanye udibanise umthunzi ngaphandle kokuba ubhekise eludongeni olungenanto. Kuba nayiphi na umbhali, kodwa ngokubhaliweyo umbhali ngokukhethekileyo, kulungile ukuphelisa yonke into ephazamisayo.
Kodwa kule minyaka ye-Twitter, ukususa iziphazamiso kunokuba nzima.
Ngokungafani noMarcel Proust, umzekelo, obhala phakathi kobusuku ukuba ahlume kwindawo egumbini le-cork, ininzi yethu ayinakukhetha kodwa kubhala naphi na naphi na. Kwaye kufuneka sibe nethamsanqa ukufumana ixesha elifutshane kunye nebala elifihliweyo, ubomi bunomkhuba wokuphazamisa.
Njengoko u-Annie Dillard efumene ngelixa ezama ukubhala isigxina sesibini sencwadi yakhe yePilgrim eTinker Creek , kwanokuba i-carrel yokufundwa kwilayibrari inokubonelela ngezinto eziphazamisayo-ngakumbi ukuba igumbi elincinci linefestile.
Kulo uphahla oluphangale ngaphandle kwefestile, iintlanzi zithatha igrari. Enye yeentlunkulu ayinalo umlenze; enye yayilahleka unyawo. Ukuba ndemi kwaye ndijonge, ndabona umlambo ophazamisayo ugijime emaphethelweni endle. Kwintlambo, ukususela kuloo mgama omkhulu, ndabona ama-muskrats kunye neentlanzi. Ukuba ndabona i-turtle e-snapping, ndagijima ngaphantsi kwaye ndaphuma kwilayibrari ukuba ndiyibukele okanye ndiyibuke.
( Ukubhala Ubomi , uHarper & Row, 1989)
Ukuze kupheliswe izinto ezintle, i-Dillard ekugqibeleni yayidonsa isicatshulwa sembono ngaphandle kwewindow kwaye "yavala imfama ngelinye ilanga ngokulungileyo" kwaye yathintela isicatshulwa kwiimfama. Wathi, "Ukuba ndifuna ihlabathi," ndathi, "Ndiyakwazi ukubheka umdwebo ocacileyo." Ngaloo ndlela ke wayekwazi ukugqiba incwadi yakhe. U-Annie Dillard Ukubhala Ubomi kukufunda okubhala nokubhala nokubhala, ukufundiswa kweelwimi, izandi kunye negama elibhalwayo.
Ngoko iphi indawo efanelekileyo yokubhala?
UJK Rowling , umbhali we- Harry Potter uchungechunge, ucinga ukuba uN Nathalie Sarraute wayenombono ochanekileyo:
Akusiyo imfihlo ukuba indawo efanelekileyo yokubhala, ngombono wam, isesidlo. Akunakufuneka wenze ikhofi yakho, akufanele uve ngathi ungobophelelwe yedwa kwaye ukuba unobhloko bombhali, unokuvuka uze uhambe kwikhefu esilandelayo ngelixa unika amabhetri akho ixesha lokuhlaziya kunye ixesha lokucinga. I-coffee writing engcono kakhulu ininzi ngokwaneleyo ukuya apho udibanisa kuyo, kodwa ingabininzi kakhulu ukuba ufanele ukwabelana ngesetafile nomnye umntu.
(udliwano-ndlebe nguHeather Riccio e-HILLARY Magazine)
Akuyena wonke umntu ovuma ukuba kunjalo. UTomas Mann wakhetha ukubhalwa kwisihlalo sosizi olwandle. UCorinne Gerson wabhala izaveli phantsi komsiki wezinwele kwivenkile yobuhle.
UWilliam Thackeray, onjenge-Drabble, wakhetha ukubhala kumagumbi ehotele. Kwaye uJack Kerouac wabhala inzululwazi uStek Sax kwindlu yangasese ehostlini kaWilliam Burroughs.
Impendulo esiyithandayo kulo mbuzo icetyiswa ngu-John Kenneth Galbraith wezomnotho:
Inceda kakhulu ekukhuselweni komsebenzi ukuba ube kwinkampani yabanye abaye balinde umzuzu wegolide. Indawo efanelekileyo yokubhala nguwe ngokwakho kuba ukubhala ngoko kukubaleka kwintlungu embi yobuntu bakho.
("Ukubhala, UkuThetha, kunye noQoqosho," I-Atlantic , Matshi 1978)
Kodwa impendulo enokuqonda ingaba ngu- Ernest Hemingway , owathi nje, "Indawo efanelekileyo yokubhala iyintloko yakho."
Umbono wokubhala kunye neenjongo zakho zokubhala
Iingcebiso eziPhambili eziBhaliweyo ze-Mark Twain
Indlela yokudlala 'Iqela leMidlalo yeGolumu yeThola leMithathu'
Imfazwe yaseKorea: I-North American F-86 Saber
Indlela yokulungisa i-MyColor kunye ne-Ambient Mustang yangaphakathi Izicwangciso zoKhanya